Mayelana - 1aviagemPlay
Sawubona wonke umuntu, ngaphambi kokuthi uqale ngicabanga ukuthi leli bhulogi elihlaselayo. lol
Usho ukuthini? (Ngisichazile kakade)
Uyabona ukuthi ukuhamba kwamabhulogi nokuvlogi kuwebhu kwakunjani, kuqala kufika amabhulogi, manje ukunyakaza kuye kwahanjiswa ku-vlogs.
Lokhu wayehlukile wayeqala njenge-vlog (isiteshi esiku-Youtube 1aviagem) futhi manje seliba ibhulogi. Yingakho ngithi lokho kwabuya emuva. =)
Futhi kungani uvula ibhulogi uma usuvele une-vlog?
Isizathu silula kunokuzwakalayo! Ekusebenzeni kwansuku zonke, amahora we-8 asevele esebenza, nge-1 ihora lesidlo sakusihlwa, ngokuhlanza indlu + eya emakethe + noma yimuphi umsebenzi wansuku zonke. Lokhu ngokwayo kakade kudla isikhathi esiningi kakhulu!
Manje engeza lokhu: + amarekhodi werekhodi + hlela + uhlele ingoma ukuthi ungaphuli copyright + lungisa umsindo wokukhuluma nevidiyo + wenze ushintsho… hawu! Ngifinyelele esiphethweni esilandelayo: "Kungcono ukushiya lokhu kochwepheshe ..."
Ngingumongameli nje kuphela, othanda ukubhala mayelana nokuhamba nezindaba zezindawo. Ngakho ngebhulogi ithola lula! Ukuzilibazisa kuthatha isikhathi esincane futhi uthola ubuso obengeziwe bokuzilibazisa ngisho nangosuku lwesibili lokusebenza! hehe.
Ngakho-ke lapha kuzoba yindawo ephezulu kakhulu kakhulu 1aviagem ukuthi uzoba nazo. Njengoba kungukufuduka ngizokuletha okuqukethwe kwesiteshi se-youtube lapha, ukufaka phakathi yonke into lapha. Ngakho-ke ekugcineni kombhalo ungabona ividiyo futhi chofoza nje kusixhumanisi. (ngaphandle kokufuna i-Google futhi ukuyithola).
Okunye futhi okwangigqugquzela ukuthi ngithuthele kwelinye izwe iqiniso lokuthi nami ngingumhambi. Futhi ngiyazi ukuthi kulula kuwe ukucinga umbhalo obhaliwe, ukopishe futhi unamathisele noma kuphi lapho ufuna khona, lapho uhlela iskripthi sakho. Futhi kulabo abathandi bokuhlela nokwenza kohambo lwabo (njengami) lokhu kwenza kube lula kakhulu! Ayikho indlela yokwenza lokhu kuvidiyo ... = ((Okwamanje)
Ekugcineni umgijimi wosuku nosuku naye, emva kokungu- #Siyibo bonke abantu futhi sidinga ikhefu. Kuthiwani ngokufunda mayelana nezwe phakathi kwalo? Futhi usalokhu ufunda ku-RHYTHM wakho, ukwazi ukubuyela emuva embhalweni, futhi uma kungacacile, noma uma kungalungile, shiya emazwaneni lokho okutholile. Ithola ilungelo elijabulisayo ngokwengeziwe?
Futhi lo mbono uhlala ufana (Ibhulogi ne-Vlog) ukuhlanganisa abantu abavela emhlabeni wonke noma okungenani ukubhala izindaba ezivela emhlabeni, ukukhuluma ngetekisi, ukwenza abantu bahambe nabo, kungakhathaliseki ukuthi bafunda noma bashukumise.
Futhi kulabo abanesizathu esithile abakwazi ukuhamba (mhlawumbe okwesikhashana noma ngokuzikhethela) nabo bazenzele okuqukethwe ngalokho okuqhubeka ngaphandle nangaphakathi kwemingcele.
Siyakwamukela! = D